Iinketho zokurhweba kwabaQalayo🥇 Funda ukurhweba ngenzuzo enkulu! NgoJanuwari 2022
Funda ngesiKhokelo se-2 soRhwebo ngo-2021 kukhetho lweNtengiso!
Ukuhlaziywa: 2 Matshi 2021
Izinketho zikuvumela ukuba uqikelele kwixabiso elizayo le-asethi ngokuhlawula ipremiyamu encinci. Ukuba uqikelelo lwakho lungena, uza kuthenga okanye uthengise iasethi kwixabiso lesitrayikhi lesivumelwano sokukhetha- oko kuthetha ukuba wenza imali.
Ukuba ayenzi njalo, ulahla ipremiyamu yakho ngokulula. Kananjalo, iinketho zokurhweba yindlela efanelekileyo yokufumana ukubhengezwa kwiimarike zezemali ngomngcipheko ophantsi, ngendlela ephezulu yomvuzo.
Ngale nto ithethwayo, iinketho zokurhweba zinobunkunkqele kunokuthenga nokuthengisa iiklasi zeeasethi zesiko- ke kubalulekile ukuba uyazi into oyenzayo ngaphambi kokwahlukana nemali yakho.
Kungenxa yoko le nto sicebisa ukuba sifunde isiKhokelo esiFundwayo soRhwebo esiyi-2 soRhwebo ngo-2021. Ngaphakathi kuyo, sichaza ii-ins kunye nokuphuma kwendlela yokuthengisa esebenza ngayo, into ekufuneka uyijongile ngaphambi kokuthenga ikhontrakthi, kwaye ngokubalulekileyo- ungayenza njani imali kwisithuba.
Qaphela: Kuya kufuneka uqiniseke ukuba urhweba ngeendlela zaseMelika okanye ukhetho lwaseYurophu. Ukuba yeyokuqala, ungaphuma kurhwebo lwakho ngaphambi kokuba ikhontrakthi iphele. Ukuba yeyokugqibela, awungekhe.
Ngaphambi kokuba sihlolisise ukuba isebenza njani inkqubo yokurhweba, kufuneka kuqala sixoxe ngokuba loluphi ukhetho. Ngamafutshane, ukhetho lukuvumela ukuba uqikelele kwicala elizayo le-asethi ngaphandle kokuba uthathe ubunini kwangoko. Endaweni yoko, ukhetho unokukunika kunene, kodwa hayi isibophelelo, sokuthenga okanye ukuthengisa i-asethi kamva. Oku kwahluke mpela kwikamva, njengoko ngokomthetho kufuneka uthathe ubunini nje ukuba isivumelwano siphelelwe.
Oku kwabonakala ngo-Epreli 2021 xa amaxabiso exesha leoyile aya esiba mbi, kuba abo babephethe izivumelwano babengenawo amandla okuhambisa izinto! Kwimeko yokhetho, nje ukuba uhlawule i-premium encinci, ufumana ukufikelela kwintengiso. Eyona njongo iphambili kukuba iasethi yakho ihambe ngaphezulu okanye ngaphantsi 'kwexabiso lesitrayikhi' ngaphambi kokuba ikhontrakthi ekhethiweyo iphelelwe. Umzekelo, masithi uhlawula ipremiyamu eyi- $ 100 ukuthenga ii-100 ze-IBM zesitokhwe.
Iikhontrakthi zinexabiso lesitrayikhi le- $ 150 kunye nokuphela kwenyanga e-1. Ukuba ixabiso lesitokhwe se-IBM lidlula ixabiso le- $ 150 ngaphambi kokuba liphelelwe, wenza inzuzo. Inzuzo yakho isekwe kwixabiso lentengiso ngexesha lokuphela, kungaphantsi kwexabiso lesitrayikhi. Umzekelo, ukuba i-IBM ivaliwe nge-160 yeedola, le yi- $ 10 ephezulu kunexabiso le- $ 150. Ubambe iikhontrakthi ezili-100, ke oku kuthetha ukuba ngokusebenzisa ilungelo lakho lokuthenga izitokhwe kwixabiso lesitrayikhi- wenze i-1,000 10 yenzuzo ($ 100 x XNUMX yezivumelwano).
Kwesinye isiphelo sebala, isitokhwe se-IBM savalwa ngexabiso elingaphantsi kweedola ezili-150, emva koko uya kuba nepremiyamu yakho eyi- $ 100. Nangona wenze ilahleko, ukwazile ukuqikelela kwicala elizayo lesitokhwe ngaphandle kokuthenga izabelo ezipheleleyo. Ngapha koko, unokuthenga iikhontrakthi zokhetho phantse kuyo nayiphi na iklasi yeeasethi. Oku kubandakanya yonke into evela kwii-indices, amandla, isinyithi esomeleleyo, ii-ETFs kunye nee-cryptocurrensets. Njengoko sigubungela ngakumbi kamva, kuyakufuneka usebenzise umthengisi we-Intanethi olawulwayo ukufikelela kwindawo yokhetho.
Iinkonzo kunye neCons of Trading Trading
Unelungelo, kodwa awunyanzelekanga ukuba uthenge i-asethi kamva
Izinketho zinokuqhuba umngcipheko ophantsi, utyalo mali oluphezulu
Amandla okuhlala ixesha elifutshane okanye elifutshane
Faka isicelo sokunyusa ubungakanani bakho bezorhwebo
Amakhulu okhetho lokurhweba kubarhwebi onokukhetha kubo
Qalisa ngekhadi lebhanki / lekhredithi okanye i-e-wallet
Urhwebo ngokuhamba kusetyenziswa i-broker app
Uninzi lwabathengisi beenewbie ezikhethiweyo zilahlekelwa yimali
Ukuqonda uKhetho loRhwebo-iZiseko
Ngokungafaniyo nendawo yokurhweba ngokwesiko- apho ufuna khona ukuthenga impahla kunye nethemba lokuyithengisa ngakumbi ngomhla olandelayo, ukhetho lokurhweba lintsokothile. Unoko engqondweni, siza kukhokela kwinkqubo yenyathelo ngenyathelo.
✔️ Iinketho zokufowuna kwaye ubeke iinketho
Ukufumana ibhola eqengqelekayo, kufuneka uqale unqume ukuba yeyiphi indlela ocinga ukuba i-asethi iya kuhamba ngayo kwiimarike. Kwihlabathi lezorhwebo lokukhetha, kuya kufuneka ukuba uthenge 'ukhetho lokufowuna' okanye 'ubeke ukhetho'.
Ngeyona ndlela isisiseko, ukuba ucinga ukuba i-asethi iya kwenza njalo Nyusa Ngexabiso, emva koko kuya kufuneka uthenge ukhetho lokufowuna. Oku kuyafana nokubeka 'i-oda yokuthenga' kwindawo yemveli yotyalo-mali, oko kuthetha ukuba uza 'kuhamba ixesha elide' kwi-asethi.
Ngenye indlela, ukuba ucinga ukuba iasethi iya kuhamba phantsi Ngexabiso, uya kucelwa ukuba uthenge 'ukubeka ukhetho'. Kwindawo yokurhweba ngokwesiko, oku kuyafana nokubeka 'iodolo yokuthengisa', okuthetha ukuba uya 'mfutshane' kwimpahla.
Nje ukuba uthathe isigqibo sokuba uyafuna na ukufowuna okanye ubeke ukhetho, kuya kufuneka ke uvavanye ixabiso lesitrayikhi leasethi. Kwimeko yorhwebo lokukhetha, eli lixabiso eliza kugqiba ukuba urhwebo lwakho luphumelele. Umzekelo, masithi ixabiso lesitrayikhi kwi-Apple stock yi- $ 280.
Ukuba ubeka ukhetho lokufowuna, oku kuthetha ukuba ufuna isitokhwe seApple ukuvala ngexabiso eliphezulu kune- $ 280 xa ikhontrakthi iphela. Ukuba ubeke ukhetho lokubeka, uya kudinga ixabiso ukuze uhlale phantsi kwexabiso lesitrayikhi le- $ 280
Izinketho kubarhwebi zihlala zikunika amaxabiso esitrayikhi amaninzi onokukhetha kuwo. Oku kuyakuba nefuthe kubungakanani bepremiyamu ekufuneka uyibekile. Ngamanye amagama, njengokubakho kokuqikelela kwakho okuza kwiziqhamo kuyanda, kunye nepremiyamu.
Kwindalo efanayo nakwiikontrakthi zekamva, ukhetho luya kuhlala lunomhla wokuphelelwa. Lo ngumhla apho uya kuba nakho ukusebenzisa ilungelo lakho lokuthenga okanye lokuthengisa i-asethi. Kwindawo yokuthengisa yokhetho ngokwesiko, umhla wokuphelelwa uhlala umiselwe uLwesihlanu wesithathu wenyanga nganye.
Nangona kunjalo, ngokusebenzisa umrhwebi okwi-Intanethi uya kuba nokuguquguquka okungakumbi. Ngapha koko, iikhontrakthi zokhetho ziqala ukusuka kusuku nje lwe-1, ukuya kuthi ga kunyaka opheleleyo.
Ukuze ufikelele kwiimarike ezikhethiweyo, kuya kufuneka uhlawule i-premium phambili. Oku kusebenza njengedipozithi engabuyiswayo. Ngamanye amagama, ukuba ukubikezela kwakho kuchanekile, kuya kufuneka uyikhuphe ipremiyamu ekubuyeni kwakho.
Umzekelo, ukuba uhlawule ipremiyamu ye- $ 200 yokufikelela kwintengiso, kwaye urhwebo lwakho lubambe i- $ 500 kwinzuzo, eyona nzuzo yakho iyi- $ 300. Ukuba ukhetho lwakho lwezorhwebo aluzange luphelele ekuphelelweni kwemali-uphulukana nepremiyamu.
Ngokobungakanani bepremiyamu efunekayo, oku kuya kuxhomekeka kwinani lezinto eziguquguqukayo. Oku kubandakanya zombini ixabiso lentengiso langoku kunye nexabiso lesitrayikhi le-asethi, xa ikhontrakthi iphela, nokuba ingaba i-asethi ihlawula izabelo okanye inzala.
Ngale nto ithethwayo, ipremiyamu iya kuhlala ngaphakathi kwe-5-10% yexabiso leasethi.
Makhe sijonge umzekelo okhawulezileyo osekwe kwipremiyamu ye-5%
Ucinga ukuba izitokhwe zeAmazon ziya kuhamba ngokwenyukayo kwiiveki ezizayo
Kananjalo, uthatha isigqibo sokuthenga ukhetho lokufowuna
Ixabiso langoku lemarike yesitokhwe seAmazon yi- $ 2,300
Ixabiso lesitrayikhi kwikhontrakthi yokhetho yi- $ 2,500
Ikhontrakthi iyakuphela kwinyanga ezi-2
Ku-5% we-2,300, i-premium yakho ifikelela kwi-115
Ukuba iAmazon ivaliwe kwiinyanga ezimbini ngexesha kwi- $ 2,700- oku kuyakufikelela kwi-200 yeedola ngaphezulu kwexabiso lesitrayikhi. Ngaphantsi kwepremiyamu yakho eyi- $ 115, oku kungakushiya unenzuzo eyi- $ 85 isabelo ngasinye.
Ngokubalulekileyo, ngekhe ubenakho ukuthenga isabelo esinye, njengoko umrhwebi ongakhetha kuye efaka ubuncinci bobungakanani beqashiso - esizigubungela apha ngezantsi.
Ubuncinane boBungakanani beLote
Kumzekelo esiwunike ngentla kwii-stocks zeAmazon, sisekele iinzuzo zethu kwisabelo esinye. Nangona kunjalo, uninzi lwabathengi olunokukhetha luya kukucela ukuba uthenge ubuncinci bobungakanani beqashiso. Kwindawo yokhetho lwesiko, oku kuhlala kunezivumelwano ezili-100. Oku akusoloko kunjalo-ngakumbi ukuba uthengisa i-asethi ephethe ixabiso elikhulu kakhulu.
Nangona kunjalo, makhe sijonge umzekelo okhawulezileyo wokuba ubuncinci besayizi yeekhontrakthi eziyi-100 zingayichaphazela njani ipremiyamu kunye neenzuzo ezinokubakho.
Masithi unqwenela ukuthenga ukhetho lweefowuni kwisitokhwe seDisney, esinexabiso lentengiso le- $ 100
Ixabiso lesitrayikhi li- $ 107 kwaye ukhetho luphelelwa lixesha kwiintsuku ezingama-30
Ipremiyamu kukhetho lokufowuna yi-7% yexabiso lentengiso lwangoku- elimalunga ne- $ 7
Umrhwebi ufuna ubuncinci bobungakanani beekhontrakthi ezili-100
Oku kuthetha ukuba kuya kufuneka uhlawule ipremiyamu iyonke eyi- $ 700
Masitsho ke ukuba ukhetho lomhlaba ngemali, izitokhwe zeDisney ezinamaxabiso ayi- $ 125 xa iikhontrakthi ziphela ngeentsuku ezingama-30. Oku kufikelela kwixabiso leedola ezili-18 ngaphezulu kwexabiso lesitrayikhi le-107. Njengoko ubambe iikhontrakthi ezili-100, oku kulingana ne- $ 1,800 kwiinzuzo. Nje ukuba uthabathe ipremiyamu eyi- $ 700 oyihlawule kwangaphambili, oku kukushiya une- $ 1,000 kwinzuzo.
Ukhetho lokurhweba: Zeziphi iiasethi endinokuzithengisa?
Ke ngoku ekubeni unoluvo ngokubanzi lokuba zisebenza njani izinto, ngoku siza kuphonononga ezinye zeasethi onokuzithengisa.
Amasheya: Olona didi lweasethi luthandwa kakhulu kukhetho lwezorhwebo lelo lempahla yendabuko eblue-chip. Uninzi lwabarhwebi luya kukunika ukufikelela kwiimarike ezininzi-kubandakanya ne-NASDAQ, NYSE, kunye ne-LSE.
Ama Indices: Uya kuba nakho ukuthenga umnxeba kwaye ubeke ukhetho kwiimarike zesitokhwe ezibanzi. Eyaziwa njengee-indices (okanye ii-indexes), oku kubandakanya iDow Jones, NASDAQ 100, FTSE 100, kunye ne-S & P 500.
Iimali: Kuyenzeka ukuba uthenge kwaye uthengise ukhetho kumzi-mveliso we-forex. Oku kuya kusekelwa kwisibini esithile semali njenge-AUD / USD okanye i-GBP / USD.
Iimveliso: Izinketho ziyindlela efanelekileyo yokufumana ukubonakaliswa kwezinto ezininzi zezigidi zeedola. Oku kubandakanya igolide, ioyile, igesi, isilivere, ingqolowa, iswekile kunye nombona. Ngapha koko, abavelisi bahlala bethenga iikhontrakthi zokhetho ukuzikhusela ngokuchasene namaxabiso entengiso akhoyo ngoku.
Ii-ETFs: Unokuthenga kwakhona ukhetho kwi ETF (Indawo yotshintshiselwano ngeNgxowa-mali). Ii-ETFs zilandelela uluhlu olubanzi lweeaseti- ukusuka kwiarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba, ukuya kwigolide, ukuya kwizitokhwe zentengiso.
Iimali zemali zedijithali: Inani elincinci lamaqonga ngoku likuvumela ukuba uthengise ukhetho kwiBitcoin. Nangona kunjalo, akukho ndawo yentengiso ilawulwayo okwangoku-ke nyathela ngononophelo.
Ukuba usebenzisa indawo ekhethekileyo yokurhweba, uya kuba nakho ukufikelela kumawakawaka eemarike. Oku kukuvumela ukuba wenze isicwangciso sokurhweba ngeendlela ezahlukeneyo ngonqakrazo lweqhosha.
Iinketho zokurhweba ngokuHlala
Injongo yeenketho zokurhweba ziphindwe kabini. Njengoko sityhile kwisikhokelo sethu ukuza kuthi ga ngoku, eyona njongo iphambili yokuthenga iifowuni kunye nokukhetha kukucinga ngexabiso elizayo leasethi. Ngokwenza njalo, unethemba lokufumana inzuzo.
Nangona kunjalo, iinketho zokurhweba zikwindlela esebenzayo yokurhawula. Ngapha koko, yile nto kanye eyenziwa ngabanikezeli bempahla yorhwebo ukuzikhusela kwixabiso lentengiso langoku leasethi yabo. Umzekelo, ukuba abalimi bombona ngoku baxhamla kwixabiso lentengiso elingaphezulu komndilili, banokuthatha isigqibo sokuthenga iindlela zokhetho
Ukuba kwaye nini xa amaxabiso embona ehla, umfama akazukulahleka. Kungenxa yokuba nangona beza kufumana ixabiso lentengiso ephantsi yengqolowa yabo, baya kwenza imali kwiimarike zezemali ngeendlela ezikhethiweyo. Kananjalo, yonke into iyalingana ngaphandle kwepesenti encinci kwimirhumo.
Kukwayimeko enjalo kwabo batyale imali kwiimarike zezemali. Umzekelo, masithi ubambe isitokhwe esinexabiso lama- $ 10,000 sama-Amazon. Uziva ngathi ukudodobala koqoqosho kwihlabathi liphela kuyeza, ke ufuna ukukhusela iphothifoliyo yakho. Kananjalo, uthenga iindlela zokhetho.
Izinketho zaseMelika neseYurophu
Zimbini iintlobo eziphambili zokhetho ezikhoyo kumabala otyalo-mali - Iindlela zaseMelika kunye neYurophu. Lowo uthengayo uya kugqiba ukuba ulisebenzise nini ilungelo lakho lokuthenga okanye ukuthengisa iasethi esisiseko.
Ukurhweba ngoKhetho lwaseMelika
Izinketho zaseMelika zikuvumela ukuba uphume kukhetho lwakho lwezorhwebo nangaliphi na ixesha phakathi komzuzu wokuhlawula ipremiyamu, kunye nomhla wokuphela kwezivumelwano.
Umzekelo, ukuba ukhetho luphelelwa lixesha ngoJulayi 1, 2021, ungasebenzisa ilungelo lakho lokuthenga okanye ukuthengisa iiasethi ngalo naliphi na ixesha ngaphambi kwalo mhla. Oku kuluncedo kakhulu kuwe njengomrhwebi ongakhetha kuye, njengoko unakho ukuvalela ngaphakathi kwiingeniso zakho ngaphambi kokuba kuphele iikhontrakthi.
Makhe sijonge umzekelo okhawulezayo.
Uthenge ukhetho lweefowuni kwioyile ngexabiso lesitrayikhi seedola ezingama-33 nge-barrel
Izinketho ziya kuphelelwa ngo-Agasti 14th 2021, kwaye uneekhontrakthi ezili-100
Uhlawule ipremiyamu ye- $ 1.30 nje ngesivumelwano
Nge-4 ka-Agasti, ixabiso leoyile likwi- $ 45 ngebhare, eyi- $ 12 ephezulu kunexabiso lesitrayikhi se- $ 33
Kananjalo, uthatha isigqibo sokufumana imali ezinketho zakho zaseMelika ngokusebenzisa ilungelo lakho lokuthenga iiasethi
Unezivumelwano ezili-100, wenze i-12 yeedola kwisivumelwano ngasinye- ngaphantsi kwepremiyamu eyi- $ 1.30, ke inzuzo yakho iyonke iyi- $ 1,070.
Njengoko ubona kulo mzekelo ungentla, umrhwebi wakwazi ukutshixa-kwiingeniso zabo kwiintsuku ezili-10 ngaphambi kokuba ukhetho luphelelwe lixesha. Akukho mntu waziyo ukuba ingaba le yayiyinto yobuqhetseba kude kube lixesha lokuphela kuka-Agasti 14. Umzekelo, ukuba ixabiso le-oyile livaliwe kwi-50 yeedola ngomgqomo, umrhwebi waphoswa yimbuyekezo ephezulu.
Kwesinye isiphelo sesibuko, ixabiso leoyile linokungqubeka ngaphantsi kwexabiso lesitrayikhi leedola ezingama-33, okuthetha ukuba ngelahlekelwe yiprimiyamu, kwaye bengenzi nzuzo konke konke!
Ukuthengisa iinketho zaseYurophu
Ngokungafaniyo nokukhetha kwaseMelika, ukhetho lwaseYurophu alukuvumeli ukuba usebenzise ilungelo lakho lokuthenga okanye ukuthengisa iiasethi ngaphambi kokuba ukhetho luphelelwe. Kumzekelo ongentla, siqaphele indlela umrhwebi awayekuyo imali kwiintsuku ezili-10 ngaphambi komhla wokuphelelwa.
Nangona kunjalo, ukuba ukuthengwa kwenziwa ngekhontrakthi yokhetho lwaseYurophu, umtyali-mali ngekhe akwazi ukwenza imali kwinzuzo yakhe kwangethuba. Ngokuchasene noko, kuya kufuneka balinde de kube li-14 ku-Agasti ukuze babone ukuba leliphi ixabiso le-oyile elivaliweyo.
Kwelinye icala, oku kukubeka emngciphekweni ngokuchasene neenketho zaseMelika, kuba awunako ukuba bhetyebhetye ekutshixeleni inzuzo yakho kwangethuba. Kwelinye icala, iinketho zaseYurophu zihlala zinexabiso eliphantsi kakhulu, ke kuya kufuneka uyithathele ingqalelo le nto.
Umahluko phakathi koRhwebo noKhetho
Ngaphezulu kwendawo yendabuko yokuthengisa, unokufumana kwakhona iinketho 'zebhanari'. Nangona kukho ukufana okukhoyo phakathi kwezi zimbini, ngenene ziindidi zeeasethi ezahluke ngokupheleleyo.
Ngokubalulekileyo- kwaye njengoko igama lisitsho, iinketho yokubini uneziphumo ezibini ezinokubakho. Uya kuphumelela isixa semali esiqingqiweyo kurhwebo, okanye ulahlekelwe sisibonda sakho sonke. Umzekelo, ukuba ipesenti yokuphumelela kwi-binary options yi-70%, kwaye ubambe i-1,000 700 leedola, uya kuphumelela i-XNUMX yeedola ngokungena emalini.
Ukuba ixabiso lesitrayikhi laliyi- $ 40, ayizukubaluleka ukuba i-asethi ivaliwe kwi- $ 41, $ 100, okanye kwi-5,000 yeedola- usenokuphumelela isixa esifanayo. Ukuba i-asethi ayihlali emalini, uphulukana nesitayile sakho se- $ 1,000.
Ngenxa yoko, sinokukhetha ngokuchasene nokuthengisa okukhethwa kukho okubini, njengoko umvuzo wakho ubunakho. Ngokuchasene noko, akukho mda kwimali onokuyifumana kurhwebo olunokukhethwa ngokwesiko. Kungenxa yokuba omkhulu umsantsa phakathi kwexabiso lesitrayikhi kunye nexabiso lokuvala kurhwebo lwakho, kokukhona uzuza inzuzo.
Uqala njani ukuRhweba ngoKhetho namhlanje
Ke ngoku ekubeni uyazi ukuba iinketho zorhwebo zisebenza njani, ngoku siza kukubonisa ukuba ungaqala njani notyalo-mali namhlanje. Ngokulandela la manyathelo acaciswe apha ngezantsi, unokubeka okanye ubeke umnxeba ukhetho kwimarike kwimizuzu engaphantsi kwe-10-15!
Inyathelo 1: Khetha indawo yokuThengisa
Inyathelo lokuqala ekufuneka ulenzile kukukhetha indawo yokurhweba ekhetha ukuhlangabezana neemfuno zakho. Uya kudinga ukubandakanyeka kwinkqubo ende yophando, njengoko kungekho babini babarhwebi banye.
Oku kufuneka kubandakanya iimetrikhi eziphambili ezinje:
Ummiselo: Qinisekisa ukuba indawo yokurhweba ekhethiweyo ilawulwa ngumzimba onelayisensi yomntu omnye. Imizekelo ibandakanya FCA (UK), iCySEC (iSipro), kunye ASIC (Ostreliya).
Iimpahla eziQhelekileyo: Jonga ukuba zeziphi iiklasi zeeasethi ezikhethwa ziziza zokurhweba. Amaqonga alungileyo aya kukunika ukufikelela kumawakawaka eemarike.
Izindlela zokuhlawula: Khetha indawo yokhetho ekuvumela ukuba ubeke kwaye urhoxise imali ngendlela oyikhethileyo yokuhlawula.
American okanye iYurophu: Qinisekisa ukuba uyayiqonda indlela esisiseko oyikhethileyo. Ngokukodwa, ngaba umrhwebi ubamba ukhetho lwaseMelika, ukhetho lwaseYurophu, okanye ukudityaniswa kwezi zimbini?
Ixabiso lePremiyamu vs iStrike: Kuya kufuneka uvavanye ukuba ukhuphiswano kwindawo yokurhweba ekukhetheni xa usiza kwipremiyamu. Ngamanye amagama, iphezulu kangakanani ipremiyamu ngokunxulumene nexabiso lesitrayikhi?
Uxhaso lwabathengi: Jonga ukuba ngawaphi amajelo enkxaso kubathengi abanikezela ngendawo yokurhweba. Oku kuyakunceda xa ufuna umrhwebi ukuba achaze ukuba isebenza njani intengiso yakho oyikhethileyo.
Ukuba awunalo ixesha lokuphanda iimetrikhi ezidweliswe apha ngasentla, singacebisa ukuba kusetyenziswe omnye wabarhwebi abathathu esiye sabacebisa kweli phepha. Onke amaqonga ethu anexabiso eliphezulu alawulwa kakhulu, anikezela ngeemfumba zeemarike onokukhetha kuzo, kwaye akuvumele ukuba ubeke imali kwangoko kwityala / kwityala.
Nje ukuba ufumene indawo efanelekileyo yokurhweba, kuya kufuneka uvule iakhawunti. Umrhwebi uyakukucela ukuba ubonelele ngolwazi lomntu siqu, olufana nolwakho:
Umrhwebi uya kudinga ukubona ikopi yesazisi esikhutshwe ngurhulumente. Oku kukuqinisekisa ukuba iqonga lihlala lihambelana nemithetho yokuchasana nemali. Kananjalo, layisha ikopi yepasipoti yakho okanye ilayisensi yokuqhuba.
Inyathelo 3: Fundisa iAkhawunti yakho yokuRhweba
Ukuze ufikelele kwiimarike zokhetho, kuya kufuneka uhlawule ipremiyamu kumrhwebi. Kananjalo, ngoku kufuneka uxhase iakhawunti yakho yorhwebo. Uninzi, kodwa ayingabo bonke, abathengisi baya kuba nomda omncinci wedipozithi oya kuthi uhlangane nawo.
Ngokweendlela zokuhlawula, oku kuhlala kubandakanya:
Ngaphandle kokukhetha iakhawunti yebhanki, zonke ezinye iindlela zedipozithi zikhawuleza.
Inyathelo 4: Khangela uKhetho lweNtengiso kuRhwebo
Ngoku ekubeni ufumene imali ngeakhawunti yakho yorhwebo, ngoku kuya kufuneka ufumane imarike oza kuyithengisa. Abarhwebi banikezela ngamawaka eemarike, ke khangela i-asethi onomdla kuyo.
Nje ukuba wenze, kuyakufuneka uvavanye ezi ndlela zilandelayo:
Ixabiso lentengiso langoku leasethi
Ixabiso lesiteleka se-asethi
Ipremiyamu efunwa ngumrhwebi
Xa ikhontrakthi yokhetho iphela
Nokuba ukhetho lolweYurophu okanye lwaseMelika
Uya kuhlala ukhetha kwiimarike ezininzi kwisixhobo esinye semali. Umzekelo, ukuba ujonge ukurhweba ngezitokhwe zakwaNike, umrhwebi unokunikezela ngamaxabiso ohlukeneyo esitrayikhi - nganye nganye ineprayimari eyahlukileyo.
Inyathelo 5: Thenga umnxeba okanye ubeke ukhetho
Nje ukuba uvavanye i iinketho Intengiso enikezelwa ngumrhwebi, emva koko kuya kufuneka ubeke urhwebo. Kananjalo, uthathe isigqibo sokuba ucinga ukuba i-asethi iya kunyuka (ukhetho lokutsalela umnxeba) okanye yehle (beka ukhetho) ngokuchasene nexabiso lesitrayikhi.
Uya kuthi emva koko ufake inani leemvumelwano onqwenela ukuzithenga-uqinisekisa ukuba udibana nobukhulu beqashiso. Inani elipheleleyo lesibonda liya kuhlaziya njengoko ufaka inani lezivumelwano kwibhokisi yoku-odola.
Umzekelo, masithi ufuna ukuthenga ukhetho lweefowuni kwisitokhwe seNike, esiphethe ipremiyamu ye- $ 4 kwisitokhwe ngasinye. Xa ufaka u-'200 'kwibhokisi yemali, isibonda siyakutshintsha sibe yi- $ 800 ($ 4 premium x 200 contracts).
Okokugqibela, gcwalisa iodolo. Nje ukuba wenze, urhwebo lwakho lokukhetha luyahlala!
Iindawo eziGqwesileyo zokuThengisa ngo-2021
Ngaba ujonga ezona ndawo zokurhweba zibalaseleyo ze2021, kodwa awunalo ixesha lokuphanda ngokwakho umthengisi? Apha ngezantsi uyakufumana ezona zikhetho zintathu ziphezulu. Aba bathengisi balandelayo banelayisensi yimibutho elinqanaba elinye, bakuvumela ukuba ufake imali ngokulula kwikhadi ledebithi / lekhadi letyala, kwaye okona kubalulekileyo kukubonelela ngamawaka eemarike.
2. Isalathiso seSixeko-Uninzi lweSebe lezoRhwebo
Ukuba ujonge ukwenza ipotifoliyo eyahlukeneyo yeekhontrakthi zokhetho, kunokuba kufanelekile ukuqwalasela iSalathiso seSixeko. Umrhwebi okwi-Intanethi ubonelela ngoluhlu olubanzi kakhulu lweentengiso ezinokukhethwa, kubandakanya yonke into esuka kwisitokhwe, izinto zorhwebo, kunye nezalathiso. Ungaqala ngeakhawunti ngemizuzu, kunye needipozithi ezincinci eziqala kwi- £ 100. Iqonga lilawulwa kakhulu, kunye neelayisensi kubandakanya ne-UK's FCA.
3. IiMarket zeCMC-Indawo yokuThengisa indawo enezixhobo zoLawulo loMngcipheko
Yaziswa ngonyaka we-1989, iiMarket zeCMC zikunika ukufikelela kumawakawaka eemarike- kubandakanya nendawo onokukhetha kuyo. Sithanda umrhwebi ngokunikezela ngezixhobo zolawulo lomngcipheko, ezinceda ukunciphisa ilahleko yakho kwimeko yokuphulukana norhwebo. IiMarket zeCMC aziqeshi ubuncinci bemali yedipozithi, kwaye unokufaka iakhawunti yakho ngedebhithi / kwikhadi letyala okanye kwiakhawunti yebhanki.
Ukukhetha urhwebo kukuvumela ukuba ufumane ukubonwa kumawakawaka eemarike ngaphandle kokuba ufuna ukuthenga eyona asethi ngokuthe ngqo. Nokuba uyakholelwa ukuba iasethi iza kunyuka okanye yehle kwiimarike, kuya kufuneka uthenge ipremiyamu encinci.
Ngokwenza njalo, unethuba lokwenza ingeniso engaphathwanga ngendlela enobungozi. Ngale nto ithethwayo, kusafuneka ube nokuqonda okuqinisekileyo malunga nokuba indawo zokurhweba ezikhethiweyo zisebenza njani-ke siyathemba ukuba isikhokelo sethu sincedile ukucoca inkungu.
Sikwathethile ngeziza zethu ezintathu zokukhetha ezona ndawo ziphambili zokurhweba ze2021, ecaleni kwenyathelo ngamanyathelo aluncedo onokuthi uqalise njani namhlanje. Kananjalo, ngokusebenzisa elinye lamaqonga ethu ekucetyiswa ukuba ungafowunela / ubeke ikhontrakthi ekhethiweyo kwimarike ngaphakathi kwemizuzu!
Yintoni ukurhweba okukhethwa kukho?
Izinketho zikunika ilungelo, kodwa kunganyanzelekanga, lokuthenga okanye ukuthengisa i-asethi kamva. Ukufikelela kwimarike, kuya kufuneka uhlawule ipremiyamu.
Yeyiphi idiphozithi encinci kwiindawo zokurhweba ezikhethiweyo?
Oku kuxhomekeke kwindawo okhetha ukungena kuyo. Umzekelo, iiMarket zeCMC azinaso isixa esincinci sedipozithi, ngelixa i-IG ifuna i- £ 250.
Isebenza njani 'i-premium' kurhwebo olunokukhethwa?
Ipremiyamu yimali engabuyiswayo oyibhatalayo ukufikelela kwimarike oyikhethileyo yorhwebo. Ukuba awupheli kwimali, umrhwebi uyigcina.
Ngaba iindawo zokurhweba ezikhethiweyo zilawulwa?
Ngokomthetho, iindawo zokurhweba ezikhethiweyo kufuneka zibambe ilayisensi yokulawula. Sikhetha iisayithi ezilawulwa yimizimba enjenge-FCA, ASIC, okanye iCySEC.
Uyintoni umahluko phakathi kokukhetha kwaseMelika naseYurophu?
Ngelixa ukhetho lwaseMelika lukuvumela ukuba usebenzise ilungelo lakho lokuthenga okanye ukuthengisa iiasethi ngaphambi kokuphelelwa lixesha, ukhetho lwaseYurophu alwenzi. Endaweni yoko, kufuneka ulinde de kuphele umhla wokuphelelwa kwesivumelwano ngaphambi kokuba ubone inzuzo yakho.
Ngaba unokufaka isicelo xa ukhetha ukuthengisa?
Ewe, uninzi lwabarhwebi abalawulwayo bayakuvumela ukuba ufake isicelo xa unyula.
Ndizixhasa njani iakhawunti yam yokurhweba?
Izinketho ezidumileyo zedipozithi zibandakanya ukubhatalwa / amakhadi etyala kunye nocingo lwebhanki. Amanye amaqonga axhasa iPaypal.